Kaadị trading ngwa Robinhood malite na Colorado - Blockchain News
The mpi odida obodo maka cryptocurrency mgbanwe na nkà na United States. Mmalite mgbanwe Robinhood dị nnọọ mara ọkwa na Twitter ya mgbasa n'ime Colorado. The trading n'elu ikpo okwu na-kpughere commision-free trading maka Bitcoin na Colorado.
Ke adianade cryptocurrencies, na Palo Alto, Calif. dabeere trading n'elu ikpo okwu na-akwado ebuka, ETFs na nhọrọ.
Colorado, nke a maara maka ya Rocky Mountain ọnụ ọnụ na blockchain-enyi na enyi iwu, enyekwara a ole na ole nke na-ekwu na-emekọ California, Massachusetts, Missouri na Montana, niile nke Robinhood kwukwara na n'oge April dị ka akụkụ nke a ala-site-ala rollout na-akpụ akpụ tinyere.
Stock cup - Walls nke ịzụrụ ...
Gịnị bụ "mgbidi" ịzụ ...
na nso nso, Japan held a blockch...
kaadị News 06.11.2018
The otu ihe na kaadị na N ...
Bitcoin & kaadị 2019 Mark...
kaadịcryptocurrencymgbanweozin'elu ikpo okwutrading
Previous Post:Bitcoin igwe ndọrọ ego netwọk Coinsource na-arụ ọrụ na multi-akpata authenticator Acuant
Next Post:Iran na eze bans ojiji nke cryptocurrencies
Ka 18, 2018 na 2:37 AM
June 3, 2018 na 3:06 AM